अश्लिल चलचित्र हेर्दा के हुन्छ ? जान्नै पर्ने केही कुरा | Makalukhabar.com
अश्लिल चलचित्र हेर्दा के हुन्छ ? जान्नै पर्ने केही कुरा
साउन २६ काठमाडौं । यदि तपाइँले अश्लिल भिडियो र तस्विर हेर्ने गर्नु भएको छ भने एक पटक पढ्नुस् । निरन्तर अश्लिल चलचित्र हेर्नेहरुमा यौन उत्तेजनाको हिसावले निक्कै राम्रो प्रभाव पर्ने सकारात्मक र कतिपय यौनिक समस्या आउने नकारात्मक परिणाम हुने एक अध्यनले देखाएको छ ।
यौन उत्तेजनाको हिसावले अश्लिल चलचित्र राम्रो भएपनि यौन सम्बन्धी धारणाका लागि भने खराव रहेको अध्यनको निष्कर्ष छ ।
यूसीएलए सेमेल इन्स्टीट्यूट फर न्यूरोराइन्सका मनोरोग चिकित्सा विभागका सहायक अनुसन्धान वैज्ञानिक निकोल प्राउसले निरन्तर अश्लिल चलचित्र हेर्नेहरुमा यौन उत्तेजनाको क्षमता निक्कै राम्रो हुन् बताए ।
अनलाइन जर्नल सेक्सुअल मेडिसिनमा प्रकाशित यो शोधका क्रममा सेक्स चलचित्र हेर्ने पुरुषमा अत्याधिक उत्तेजनाको स्तर रहेको पाहियो ।
तर यो अध्यनले यौन चलचित्रहरु हेर्नेहरुमा यस्तै चलचित्रको प्रयोग पति पत्निमा गर्न खोज्ने र सेक्स समस्या देखा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तै यौनआनन्द पाउने उपायहरूमध्ये यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो । यौनसम्पर्कमा यौनाङ्गहरू नै एक-आपसमा घर्षण गराइन्छ । यस्तो घर्षण अरू कसैको यौन अङ्गमा गराउँदा मात्र होइन, हातले गराउँदा पनि आनन्द आउँछ। सिद्वान्ततः यौनसम्पर्क गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन आनन्द पाउने प्रक्रिया उस्तै हो । त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि नहुने र हस्तमैथुन गर्दा हानि हुने कुरा भन्न मिलेन । कतिपय गलत धारणा वा भ्रमहरू व्याप्त भए पनि हस्तमैथुनले स्वास्थ्यसम्बन्धी हानिनोक्सानी गर्दैन ।
हस्तमैथुनले यौनइच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ । यो महत्त्वपूर्ण फाइदा हो । त्यसैगरी हस्तमैथुनले अनावश्यक गर्भधारण, देहव्यापारीसँगको यौनसम्बन्ध, यस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुने धन तथा समयको दुरुपयोगबाट पनि बचाउँछ । अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क नै नहुने भएकाले अहिले चर्चामा रहेका एड्स वा अन्य यौनरोगहरू लाग्नबाट पनि बचिन्छ । हस्तमैथुन आफैंले खराबी गर्ने नभए पनि यसैसँग जोडिएर आउने हीनताबोध वा दोषीपनले समस्या उत्पन्न गराएको हुन्छ ।
प्राकृतिक शारीरिक क्रियाकलापसँग अमिल्दा रूपमा भएका मूल्य-मान्यताले यस्तो नकारात्मक असर देखाउँछ । यसलाई हामीले मनवाट निकाल्न सक्नुपर्छ । यसको आदत वा बानी हटाउने सन्दर्भमा के भनौं भने त्यसलाई हटाउनैपर्छ भन्ने छैन । अनावश्यक रूपमा कुनै उपचार गरिदिन्छु भन्नेहरूको मीठो बोलीमा नफस्नुहोला । ती कुराले तपाईंलाई भन्दा उपचार गर्नेलाई फाइदा हुन्छ, तर पनि तपाईंको जिज्ञासा भएको विषयमा केही चर्चा गरौं । यो सजिलो नहुन सक्छ, तर शारीरिक रूपमा धेरै परिश्रम पर्ने किसिमको काम वा खेलकुदहरू, यौन उत्तेजना नहुने प्रकारका साहित्य पढ्ने वा आफ्नो सौखका अन्य विषयमा प्रशस्त समय दिनेजस्ता क्रियाकलापबाट पनि हस्तमैथुन गर्ने कार्यलाई कम गर्न सकिन्छ ।
हस्तमैथुन गर्न पायक पर्ने ठाउँ र समयको खोजीमा प्रशस्तै शक्ति खर्च गरिन्छ । त्यसैले एकान्त वा हस्तमैथुन गर्न पायक पर्ने ठाउँमा सकभर नबस्ने प्रयास गर्नुपर्छ । बरु सक्दो अन्य व्यक्तिहरूको माझमा समय बिताउने बानी बसाउन सके हस्तमैथुन गर्न पायक पर्दैन । यस्ता उपायले हस्तमैथुन गर्ने बानीमा कमी ल्याउन सकिन्छ । विवाहपछि नियमित यौनसम्पर्क गर्ने अवसर पाइने भएकाले उक्त क्रियाकलापमा स्वाभाविक रूपमा कमी आउँछ । तपाईंलाई महिलासँगको यौनसम्पर्क हुँदा यौनेच्छा शान्त पार्ने वैकल्पिक उपायको आवश्यकता नभएको देखिएको छ, तर तपाईंले विवाहभन्दा बाहिरको यौनसम्बन्धले ल्याउने समस्याका बारे मा विचार पुर्‍याउनुभएकै होला ।
के हस्तमैथुनले विवाहित जीवनमा असर गर्ला ?
मानिसले विवाहपछि पनि हस्तमैथुन गर्छन् । कतिपय परिस्थितिमा विवाहित भए पनि यौनसम्पर्कका अवसरहरू प्राप्त नहुँदा यस्तो गरिन्छ भने कहिले अवसर पाएको स्थितिमा पनि । पहिलेदेखि बानी परेका केही व्यक्ति सजिलो रूपमा यौन चरमसुख पाउन हस्तमैथुन गर्छन् । कहिलेकाहीं मात्र यस्तो हुने गरेको र सामान्य यौनजीवनलाई प्रभाव नपारेको भए त खासै केही फरक पर्दैन, तर आफ्नो यौनसाथी अर्थात् श्रीमान् वा श्रीमतीसँग यौनसम्पर्क नै नगरेको स्थितिमा भने फरक पर्छ ।
दुवैजना आपसी हस्तमैथुन (जुन आफैंमा पाक्क्रीडा हो) मा संलग्न भए यौनआनन्दलाई बढाउन सकिन्छ । के यो शीघ्रपतन हो र कसरी समय बढाउने र यौन उत्तेजनामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुरामा भर पर्छन् । यी कुरा योनिमा लिङ्ग पसाएपछि मात्र सुरु हुने होइन ।
प्रायः सबैजसो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कुनै बेला वीर्य स्खलन चाँडो भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । किन्सेले गरेका अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको २ मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषको चरमसुख पाएको कुरा देखिएको थियो । वैज्ञानिकहरूबीच शीघ्र स्खलनलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने बहस पनि नभएको होइन । लिङ्ग योनिमा पसाएको ३० सेकेन्डमै वा एक मिनेटभन्दा कम समयमा वा ५ देखि १० धक्कामै वीय स्खलन भए छिटो स्खलन भएको भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास पनि भए, तर अहिले यो सोचमा केही परिवर्तन आउन थालेको छ । यसरी छिटो वीर्य स्खलन हुनुलाई शीघ्र वीर्य स्खलन भनिन्छ ।
जोडीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ताले समस्या बढाउँछ । केही औषधीको पनि यस्तो प्रभाव हुनसक्छ । आक्कल-झुक्कल यस्तो शीघ्र स्लखन हुनु अस्वाभाविक होइन । यौनसम्पर्क रोक्ने सुरु गर्ने, आसन परिवर्तन गर्ने, स्खलन होलाजस्तो भएपछि तुरुन्तै लिंग योनिबाट बाहिर झिकेर लिङ्गको फेदलाई बेस्सरी अठ्याउने, कन्डम प्रयोग गर्ने, पिसाब आउँदा रोक्न प्रयोग गर्ने मांसपेशीको कसरत गरेर वीर्य स्खलनलाई रोक्ने अभ्यास गर्न सके पनि फाइदा पुग्छ । एजेन्सी
बकर इद: प्रदेश २ मा सोमबार सार्वजनिक बिदा
चिसो बढेसगैँ निमोनिया हुने सम्भावना धेरै, बच्नका लागि यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्
मंसिर २०, काठमाडौं । निमोनियाले प्रति वर्ष विश्वभर १५ करोड ५० लाख बालबालिका बिरामी पर्दछन्।निमोनिया ५ वर्ष मुनीका बच्चाहरुको मृत्यको एक प्रमुख कारण हो। ५ वर्ष मुनिका बाल बालिकाको मृत्यु मध्ये १५ प्रतिशत मृत्यु यो रोगको कारणले मात्र हुन्छ।यदि उपयुक्त कदम नचालेमा यो रोगको कारणले सन् २०३० सम्ममा विश्वभ... जारी राख्नुहोस...
यी ३ सामान्य सूत्रले तपाईँलाई स्वस्थ रहन सघाउछ
मंसिर १८, काठमाडौं । मस्तिष्क स्वास्थ्यको लागि दैनिक नियमित व्यायाम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसको लागि आफ्नो निन्द्रा, खाना र व्यायाममा ध्यान दिन सबैभन्दा जरुरी हुन्छ । कसरी यी सबैलाई मिलाएर सधै खुशी हुन सकिन्छःसुत्ने समय मिलाउनुस्हाम्रो मस्तिष्कले हामीले बनाएको तालीका अनुसार काम गर्न सजिलो महसुस गर्छ ।... जारी राख्नुहोस...
खुट्टा गन्हाउने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ उपाय
मंसिर १३, काठमाडौं । खुट्टा गन्हाउने समस्या आम समस्या हो । गन्हाउने समस्या फङगसबाट हुन्छ । खुट्टा तातो भएर पसिना आउँदा फङगस उत्पन्न हुन्छ । जसका कारण गन्हाउन सुरु हुन्छ । यो समस्या भइसकेपछि ३–४ हप्तासम्म ध्यान दिनुपर्छ । यसका लक्षणहरू विशेष गरी खुट्टाको औंलाको कापमा र छालामा चिरा पर्ने, फोका निस्की... जारी राख्नुहोस...
मंसिर १३, काठमाडौं । जब तपाईं सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, तपाईंहरु बीचको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुन्छ जसले सम्बन्धलाई सधैं जीवन्त राख्न सहयोग गर्दछ । तर कहिलेकाँही हामी सम्बन्धमा रहँदा यस्ता काम गर्छौं जुन पार्टनरलाई धोका दिनुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ ।१. झुटो बोल्नुहामीले बाल्यकालदेखि नै सिक्दै आएका... जारी राख्नुहोस...
यस कारण देखिन्छ याैन सपना
मंसिर ११ । निदाइरहेको बेलामा एकपछि अर्को विचार, भावना र संवेदना अचेतनरूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो । मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ, राम्ररी बुझ्न सकिएको छैन ।सपना विभिन्न किसिमका (डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौनसम्बन्धी) हुन्छन्... जारी राख्नुहोस...